Marii paartiilee siyaasaafi dhaabbilee siviilii irraa maaltu eegama? - BBC News Afaan Oromoo
Mummeen ministiraa Dr Abiy Ahimad har'a galgala paakartilee morkattootaa fi waldaalee siviilii waliin ni mari'atu jedhamee eegama.
Dhimmicha irratti kan gaafanne dura taa'aan itti aanaa Paartii Kongirasii Federaalistii Oromoo Obbo Baqqalaa Garbaa "namni sirnaan bilbilee yookin xalayaadhaan natti hime hin jiru, akka odeessaatti garuu Dr Mararaan natti himaniiru" jedhan.
Mootummaan mariif kan nu barbaadu yoo ta'e dhimma marii nutti himanii yookin wanta akka irratti mari'atamuu barbaannu nu gaafatanii beellamaan osoo nu waamanii gaarii dha jedhan.
"Waamicha har'aatiinis carraan marii yoo argame labsiin yeroo muddamaa akka ka'u, sochoonnee akka uummata waliin wal argin u, fillannoo itti aanuf akkatti qophoofnu, waajjira akka banannu, uummata akka ijaarru fi dirreen siyaasaa akka bal'atu ni gaafanna" jedhaniiru.
Mootummaan yeroo gabaabduu keessatti iddoo akkasiitti koottaa jedhee adeemsa siyaasaa fagoo deemsisu natti hin fakkaatus, akkaataan amma itti waamanis of irraa baasaaf kan waaman natti fakkaata jedhan.
Kana malees Obbo Baqqalaan mootummaan marii dhaaf kan nu waamu yoo ta'e fooyya'iinsa sirna siyaasaa biyyattiif jalqabbii gaarii ta'uu danda'ullee affeerraa laaqanaa yookin irbaataaf qofa waamamuun garuu waan faayidaa qabu akka hin taane himan.
Dura taa'aan paartii samaayaawii Obbo Yashiwaas Assaffaa gamasaaniitin har'a galgalatti waamamuu isaanii fi sagantichi maal irratti kan xiyyefate akka ta'e garuu quba hin qabnu jedhaniiru.
Gama biraatin daawwannaa muummeen ministiraa Abiy Ahimad kutaalee biyyattii garaagaraatti taasisaa jiran irratti kan gaafataman dura taa'aan itti aanaa paartii kongirasii federaalistii Oromoo Obbo Baqqalaa Garbaa daawwanaan gaarii ta'ullee hojiitti jijjiiramuu akka qabu himan.
Akka fakkeenyaatis "daawwannaa naannoo Somaalee keessatti taasisan irratti namootni walitti bu'iinsichaaf fi ajjeechaa namootaaf sababa ta'an seeratti osoo hin dhiyeesin dhiisaa jedhanii galuun adeemsa gaaruu ta'ee nutti hin mul'atu" jedhaniiru.